HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး59 Corluသတင်းထောက် Mustafa သာယာသောလျော်ကြေးတရားစွဲဆိုမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး Corlu ရထားဘေးအန္တရာယ်
04 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 59 Corlu, 59 Tekirdag, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
corlu ရထားသုတေသနသတင်းစာဆရာ Mustafa ရေပိုက်လျော်ကြေးငွေ davasi facias
25 လူနီးကပ်စွာတထောင်ပေါင်တရားစွဲ tan 110 "ပစ်မှတ်ထားဖို့သတိလမ်းအတွက်တရားစီရင်ရေးအခွင့်အာဏာ" ကိုကောင်းတဲ့ ပတ်သက်. ဘေးအန္တရာယ်သတင်းစာဆရာ Mustafa ၏အစအဦးကတည်းကနောက်တော်သို့လိုက်, အသက်ရှင်ခြင်း၏Çorluအစိုးရရှေ့နေများဆုရှင် Yilmaz Özkurşအတွက်မီးရထားဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားမှု overlooks ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
16 Punto သာယာသောလျော်ကြေးငွေတရားသဖြင့်စီရင်သတင်းစာဆရာ Mustafa တုံ့ပြန်သတင်းအဆိုအရ "Corlu ရထားဘေးဥပဒ်ကိုအစိုးရရှေ့နေတရားရုံးငါ့အားအပ်ပေးတော်မူပြီ။ ပစ်မှတ်ထားဖို့တမင်ထုံးစံ၌ရာဇဝတ်မှုတရားစီရင်ရေးအခွင့်အာဏာ။ TCDD အုပ်ချုပ်ရေး၏ဘဝအစိုးရရှေ့နေ 25 တထောင်ပေါင်လိုလားတရားစွဲဆိုလို့မရဘူးကုန်ကျထားတဲ့ချုံးများအတွက် 110 "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Porte တီဗီသာယာသောပေါ်မှာရှိတဲ့ပရိုဂရမ်အကြောင်းကိုတင်သွင်းသည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကဲဖြတ်, ဆုရှင်အစိုးရရှေ့နေတွေကသူ Yilmaz Özkurşunအကောင့်ဆန့်ကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘာမျှခဲ့ဟုဆိုသည်။
၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များ၏စစ်မှန်သောခံစားချက်တွေကိုဝတ်စုံကိုနောက်လိုက်ဖို့ရှိမရှိကိုညွှန်းသာယာသောအစိုးရရှေ့နေများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခံစားချက်တွေကိုနှင့်အတူတစ်ဦးကသမ်မတနိုငျငံ, "ဟုတမင်ထုံးစံ၌သတင်းထောက်တစ်ဦးတရားစီရင်ရေးအခွင့်အာဏာကိုယူ-Up / ပစ်မှတ်ထားမထားဘူး" ဟု၎င်းကပြောသည်။
ကြောင်းခြိမ်းခြောက်မှုမှုကိုအလေးအနက်သာယာသော "အတိုင်းလိုက်နာရန်ဤအမှု၌" ဟုအဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူကတရားစွဲဆိုမှုသူ့ကိုတွှေမည်မဟုတ်ခြင်းနှင့်အမှုအတိုင်းလိုက်နာဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။
စက်တင်ဘာလ Corlu ရထားဘေးအန္တရာယ်အတွက် 12 ကနောက်ဆုံးကြားနာ၏စမ်းသပ်မှုအသစ်တစ်ခုကျွမ်းကျင်သူသက်သေကိုဒီဇင်ဘာလ 10 အတွက်လာမယ့်ကြားနာရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်တည်ထောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
သာယာသောတရားစွဲထားတဲ့အစိုးရရှေ့နေ Mustafa အကြောင်းကို 110 တထောင်ပေါင်, အကျွမ်းကျင်သူကော်မတီကပါမောက္ခ Siddiq Binboğa Yarman ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Yarman လည်းKaraşahinအဖြစ် TCDD နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆက်ဆံရေးကြောင်းကိုလည်းထင်ရှားခဲ့ကွောငျးစိတျထဲတှငျဦးသေဆုံးပြီးအခြားကျွမ်းကျင်သူ Mustafa 41 လူတစ်ဦး၏ Pamukova ရထားဘေးအန္တရာယ်အဖြစ်Karaşahinဖြစ်ပါတယ်။ (T24)
Corlu ရထားအဖွစျဆိုးကိစ္စ, ယနေ့ 600 နှစ်ချက်ဆွဲဆောင်မှုခန်းမထဲမှာ 10 / 09 / 2019 နောက်ပိုင်းမှာ Tekirdag Corlu ခရိုင်အတွင်းရှိမိသားစုနှင့်ရှေ့နေများက '' အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အသေး၏ '' ခန်းမအတွင်းပထမဆုံးကြားနာမှုကနေဆုတ်ခွာဖို့တရားရုံးကြောင့်အသေးစားနှင့်ရဲခိုင်ခိုင်လုံလုံအပေါ်မိသားစုနှင့်ရှေ့နေများခန်းမခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး faciayl နှင့် ပတ်သက်. တရားစွဲဆိုမှု၏ပထမဆုံးကြားနာ၏ Lounge များတွင် 25 လူများ, သေဆုံးခဲ့သည် 328 လူတွေဒဏ်ရာရ, အတွင်းပိုင်းယူကြောင်းကြေညာခဲ့သည် ဒါဟာအားဖြင့်ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသည်။ သူကတရားရုံးကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့မှုကြားနာ၏တင်သည့်အောက်ပါ။ စက်တင်ဘာလ Corlu 10 600-ထိုင်ခုံခန်းမထဲမှာရွှေ့ဆိုင်းပထမဦးဆုံးတရားရုံးကြားနာပြည်သူ့ပညာရေးစင်တာ၌ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အစ္စတန်ဘူလ်၏သတင်း txnumx, Edirne အဆိုအရUzunköprüခရိုင် Halkalı'' Moving သို့မဟုတ်သွားကြဖို့အကြောင်း 3626ခရီးသည်နှင့်ခရီးသည်တင်မီးရထားဝန်ထမ်းများတွေ့ရှိခဲ့ဇူလိုင်လ 8 2018 အတွက် Tekirdag ...
ဧဒင်ဥယျာဉ် Corlu ရထားအဖြစ်ဆိုးကိစ္စတွင်အပေါ်စကားရပ်တုန်လှုပ် 10 / 09 / 2019 Corlu 25 လူတွေကသူတို့ဘဝဆုံးရှုံးခဲ့ရ, 328 1 Corlu လူတွေကို related တရားစွဲမှု၏ဒုတိယ session တစ်ခုရထားအဖြစ်ဆိုးအတွက်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါအမြင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးကÇorluအရွယ်ရောက်ပညာရေးစင်တာတွင်တွေ့မြင်ခံရဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ လမ်းလိုင်းစွပ်စွဲတီကောင် "အုပ်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ သူတို့ကဘယ်မှာဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုအလွန်ကောင်းစွာသိကြ၏။ သူတို့ကယခုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသောအခါသတိပေးတာဝန်ရှိသည်လိုရှိ၏။ အဆိုပါ 2001 အတွက်ကစားသမားအနေဖြင့်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ် "။ သူကပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှာအစီရင်ခံစာများအဆိုအရဆိုပါတယ်;" နံနက်ယံ၌ရထားအဖြစ်ဆိုးမှာသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများဆုံးရှုံးခဲ့ရသူအစောပိုင်းနာရီ, "ကျနော်တို့ကတရားမျှတမှု Want" အတွက်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေထင်ရှားလိမ့်မည်ကြားနာအများပြည်သူပညာရေးစင်တာရှေ့၌ပေါ်လာသော။ လုံခြုံရေးအရာရှိတွေကအပေါ်စွဲချက်တင်အတွက်သားကောင်၏အမည်ကိုသာဝင်နိုင်ကြောင်းတရားရုံးကြားနာမှု၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပြောကြားခဲ့့သည်က ...
ဒီဇင်ဘာလ 10 ရွှေ့ဆိုင်း Corlu ရထားအဖွစျဆိုးစမ်းသပ် 12 / 09 / 2019 Tekirdag Corlu ၏ခရိုင်များတွင် 25 ကလူဦးသေဆုံးခဲ့သည်, လူတွေဒဏ်ရာရသော Corlu 328 ရထားချုံးချုံးကျသွားတယ်နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စ၏ဒုတိယကြားနာခြင်းသင်တန်းကျောင်းမှာနေတုန်းပဲဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါBirgün'ün Gokay bascak နေအစီရင်ခံစာအရ; "မနေ့ကမြင်ကြနှင့်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား xnumx'inc ၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုကြားနာမှာပြီးစီးခဲ့ခံရဖို့ယနေ့ဆက်လက် Halkalı ဒါရိုက်တာမီးရထားကို Maintenance မီးရထားကို Maintenance ဦးစီးဌာန Turgut Kurt အဖြစ်အမှုဆောင်xnumx'ünc Çerkezköy လမ်းမကို Maintenance လမ်းကို Maintenance နှင့်တာဝန်ရှိသူများအမြန်အရာရှိချုပ်နှင့်အတူ TCDD တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Bridges ခဲ့ဘူးအဖြစ်Özkan Polat လမ်းကို Maintenance လိုင်းကို Maintenance ရာနှင့်Şefliği Jalaluddin အတွက်ပြုပြင်ရေးကြီးကြပ်ရေးမှူးŞefliği Repair Cetin Yildirim ကာကွယ်ရေးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ တရားရုံးအတွင်းဆုံးဖြတ်ချက် ...
မိုဟာမက် 222 တထောင်ပေါင်လျော်ကြေးငွေ၏ရလဒ်အဖြစ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူ Pamukova ရထားဘေးအန္တရာယ်မိသားစုများ 26 / 12 / 2013 မိုဟာမက်၏မိသားစုမှ 222 တထောင်ပေါင်လျော်ကြေးငွေဆုံးရှုံး၏ရလဒ်အဖြစ် Pamukova ရထားဘေးအန္တရာယ်: အတရားစီရင်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်အရှိန်မြှရထားဘေးအန္တရာယ်ကနေရလဒ်ကြောင့် Sakarya 41 သေဆုံးမှုအတွက် Pamukova နှစ်ကြာပြီးနောက်9ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏ဖခင်နှင့်အစ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသူမယ်တော်ကပ်ဘေးဆိုင်ရာမတော်တဆမှု, Muhammet Aydin, TCDD ဖွင့်လှစ်သောအမှုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ တရားရုံး9222 တထောင်တစ်ဦးနှစ်အရွယ်မိဘမဲ့မုဟမ္မဒ်လျော်ကြေးငွေများ၏ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်အုပ်ချုပ် POUNDS ။ Pamukova Sakarya 9,5 အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတရားရုံး 41 လူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုအသတ်ခံရသောအရှိန်ရထားပျက်ကျမှုအပေါ်အာဏာရအပ်ပေးတော်မူ၏။ မတော်တဆမှုအတွက်Şaziyeမိခင်, သူ့အစ်ကို Yavuz ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်7နှစ်အရွယ်Mevlütသူကိုမိမိအဘ, သူ့ဟာသူအလေးအနက်ထား Muhammet Aydin ဖြောင့်မတ်ဒဏ်ရာရတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တူရကီသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်မီးရထား ...
TCDD 103 တထောင်ပေါင်လျော်ကြေးကိစ္စတွင် 15 / 08 / 2019 မြန်နှုန်းမြင့်ရထား 13 ဒီဇင်ဘာလ 2018 လမ်းညွှန်ရထားတိုက်မှု9ကလူဦးသေဆုံးခဲ့သည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် Konya ပျံသန်းသောတူရကီ, 86 လူတွေဒဏ်ရာရအတွက်မီးရထားမတော်တဆမှု Turan Berkan Çetinတူရကီပြည်နယ်မီးရထားမှ (TCDD) 103 တထောင် 262 ပေါင်တရားစွဲဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။9လူတွေကတူရကီဒေါက်တာများတွင်မီးရထားမတော်တဆမှုဦးဒဏ်ရာရ 86 အချိန်ကြာမြင့်စွာသူတို့ဘဝများနှင့်လူဦးဆုံးရှုံးခဲ့ရ ကင်ဆာနှင့်သုတေသနဆေးရုံဖျော Abdurrahman Yurtaslan ကြောင့်ဆက်လက်ဒဏ်ရာနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏ Cetin, အရှည်လျားကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်အားကုသ, Non-pecuniary ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် TCDD အရေးယူဖွင့်လှစ်။ မတော်တဆမှု Marsandiz ဘူတာရုံအချက်ပြ၏မရှိခြင်းအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရှိရာတရားရုံးတစ်ဦးကအသနားခံစာ ...
မိုဟာမက် 222 တထောင်ပေါင်လျော်ကြေးငွေ၏ရလဒ်အဖြစ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူ Pamukova ရထားဘေးအန္တရာယ်မိသားစုများ
Corlu ရထားမတော်တဆ Investigation're အဆိုပြုချက်ပယ်ချ AKP နှင့် MHP
Çorluအတွက်မီးရထားအဖြစ်ဆိုး: များအတွက်ရောင်းချနှစ်ချက် 360 563 ရထားလက်မှတ်တွေ
အဆိုပါ CHP အုပ်စုတစ်စုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Corlu ရထားအဖွစျဆိုးများအတွက်အဆိုပြုချက်ကို
ကြေညာလိုက်သည် IMO Corlu ရထားဘေးအန္တရာယ်အစီရင်ခံစာ